Akọrọ ngwa agha Plant, akọrọ Blender Machine, ntụ ntụ mbukota Machine - QuanHua
Nka na ụzụ Ike
Akọrọ ngwa agha Plant
Large Njikere Mix Nkịtị kpọrọ nkụ ngwa agha Plant
Special kpọrọ nkụ ntụ ntụ ngwa agha Plant
QH-40 Series kpọrọ nkụ ntụ ntụ ngwa agha Plant
QH-60 Series kpọrọ nkụ ntụ ntụ ngwa agha Plant
Wall putty Ịgwakọta Machine
QH-20 Simple Wall putty Ịgwakọta Machine
QH-50 Full-Auto Wall putty Ịgwakọta Machine
Ngidi nrapado Manufacturing Plant
Njikere Mix plasta Plant
Akọrọ Mix ngwa agha Plant
Gbochie Ime igwe
FULL-UTgbọala na-eme igwe
SEMI-UTLỌ MGBE NA-EME igwe
Akọrọ Blender Machine
Ugboro abụọ aro naa igwekota
LDH koo igwekota Machine
Ribbon igwekota Machine
Ájá mkpoko n'elu silo
Ntụ ntụ mbukota Machine
Open n'Ọnụ Bag ndochi igwe
Jumbo bag ndochi Machine
Rotary mbukota igwe
Valvụ Bag mbukota Machine
Ngwa igwe eji ekpuchi ihe
ịwụ Igwe Mbuli
Ne Chain ịwụ Igwe Mbuli
Td-echebe Mmadụ ịwụ Igwe Mbuli
Þ Chain ịwụ Igwe Mbuli
Aja Production System
Agha Crusher Machine
Mobile ndinuak Osisi
Aja Ime System
Automatic spraying na plasta Machine
Ngwa agha spraying Machine
Wall plasta Machine
Concrete Ft egweri Machine
Mobile kpọrọ nkụ ngwa agha Production Line
Robotic Palletize Sistemụ
India Clients-15 Full-akpaaka akọrọ ngwa agha igwekota osisi
Malaysia Clients -25TH Full-Auto kpọrọ nkụ plaster ngwa agha igwekota osisi
Qatar Clients-10th Full-Ụgbọala akọrọ ngwa agha igwekota osisi
Russia Clients-30th Full-akpaaka akọrọ ngwa agha igwekota osisi
UAE Clients- 15 ọkara akpaaka akọrọ ngwa agha igwekota osisi
Uzbekistan Clients-20 Full-akpaaka Tower Type kpọrọ nkụ ngwa agha igwekota Plant
Ekwentị: + 86-18660118268
Akọrọ mix ngwa agha osisi
QH-30 Simple Type kpọrọ nkụ Mix ngwa agha Plant, ọ na-steepụ kwụ (ọdabara ala osisi), magburu onwe arụmọrụ, dị mfe ọrụ, ekpuchi mpaghara ebe obere, obere unit oru (2-3), elu ihe agwakọta [.. ] Gụọ More
Tile nyagide n'ichepụta osisi
Ngidi nyagide n'ichepụta osisi a na-iji na-emepụta seramiiki tile nrapado, dịanyā, okpomọkụ ichebe multiplexed usoro ojiji nyagide ngwa agha, masonry ngwa agha [..] Gụọ More
Njikere mix plasta osisi
Njikere mix plaster osisi a na-iji na-emepụta na-elu àgwà na gburugburu ebe obibi plaster gypsum na onwe-leveling gypsum. The plaster gypsum bụ isi leveling. The akụrụngwa nke [..] Gụọ More
Shandong QUANHUA Bubata & Export CO., LTD.
Quan Hua Group headquartered emi odude ke Jinan, obodo nke isi iyi, ọ bụ nnukwu-ọnụ ọgụgụ enterprise tụnyere mmepụta, nnyocha sayensị, ahịa, mbubata na mbupụ ahia. The ụlọ ọrụ e guzobere na 2003. Anyị factory adreesị bụ Anqiu Shiquan Industrial Park, Weifang City, Shandong Province,-ekpuchi ebe ndị 200,000 square mita na a ụlọ nke ebe 120,000 square mita, na 300 ọrụ, Ọ bụ ugbu a iwu onye na mkpokọta kpuchie, isi ụlọ ọrụ bụ tumadi nke na-ewu ígwè, gbakwunyere na echichi na-ewu.
Anyị na gị bụ agwakọta ngwọta na enye
Dị ka a na-eduga emeputa nke akọrọ mix ngwa agha osisi na-ewu ụlọ na ngwá igwe na china, anyị na-agba mbọ ka ịbụ na-ebute ụzọ nkà na ụzụ na ọhụrụ na nọgidere rụọ niile ebe ndị anyị na-azụ ahịa. Anyị atụmatụ na-enyere anyị nweta a ike okwa na mba ahịa na-ana achi achi a ogologo okwu ibu. Quan Hua brand na-ewu ewu na ndị ụlọ ọrụ na anyị igwe nwere exported na Malaysia, Vietnam, Russia, Kazakhstan, Uzbekistan, Mongolia, Qatar, Algeria, Egypt na mba ndị ọzọ. Meriwo ndị ahịa support na ntụkwasị obi.
commisioned ruo ụbọchị
anyị exported ka
ISO na OA akwụkwọ
24-hour online reply ma ọ bụ na-akpọ azụ
Akụkụ ahụ mapụtara na quick- wear akụkụ ọkọnọ
Free-ọzụzụ maka gị rụọ
Gịnị bụ akọrọ ngwa agha?
1. N'ụzọ dị iche na ọrụ-site ogbunigwe, akọrọ ngwa agha a na-akpọ tupu mbuaha ngwa agha, nke na-emepụta na factory na raara onwe ya nye ụlọ ọrụ na batching na agakọ nke Efrata na ukwuu na-achịkwa usoro. Ọ ga-eji na-dị nnọọ site na-agbakwụnye na mmiri ọrụ na saịtị.
2. Ọ nwere uru nke na-agbanwe agbanwe àgwà, na-achịkwa yiri nkata, na-azọpụta oge na ọrụ na-eri. Site na-agbakwụnye iche iche chemical nwekwara, o nwere ezi Njirimara nke nkekọ, kwes na now mkpuchi, ịgbawa-eguzogide, workability, Mmiri-njigide, na-eyi na-àmà, mgbochi corrosion, wdg
3. kpọrọ nkụ ngwa agha nwere ike dakọtara dị iche iche iche iche nke ọhụrụ ewu ihe site n'imeziwanye Nwa. Ọma ndị a Njirimara bụghị naanị mma ụlọ si àgwà na ndụ nke ukwuu, ma na-ibelata ojiji nke ngwa agha na a nnukwu ogo.
4. The ina akọrọ ngwa agha amụbawo ngwa ngwa ruru ya pụtara ìhè n'uru atụnyere na ngwa agha nma ọrụ-na saịtị.
Ọ bụrụ na ị ga-achọ iru a akọrọ ngwa agha osisi gị factory, anyị QuanHua igwekota Team ga-eji ha buru ibu nka na oru ihe ọmụma na-chepụta otutu n'ihu-ọgwụgwụ engineering of kpọrọ nkụ Mix ngwa agha Industries.
Anyị ukwuu nwetara injinia enye akọrọ mix osisi imewe, na-amalite na-elu-support, nchọpụta nsogbu, ọzụzụ, nke abụọ echiche reviews na revamp ọrụ na-amụba gị akọrọ mix ngwa agha osisi ikike. Ọ bụrụ na ị dị njikere iji mụtakwuo banyere ọrụ anyị, anyị dị njikere inyere gị aka na imewe gị chọrọ.
Anyị na-agba mbọ na-enye na-eri irè ngwọta na àgwà ngwaahịa na a nnọọ ngwa ngwa turnaround. Anyị bụ otu n'ime ole na ole na-aghọta àgwà na nnyefe chọrọ nke anyị anụ ụlọ na mba ahịa. Akọrọ ngwa agha osisi na-e Idebe n'uche akọrọ mix ngwa agha osisi ngo na-atụ anya na ego.
Nlụpụta na Nnyocha
QuanHua igwekota Equipment Machine Factory-ekpuchi ebe ndị 200,000 square mita na a ụlọ nke ebe 120,000 square mita, na 300 ọkachamara ọrụ. All akụrụngwa igwe rụpụta dị ka ISO9001 na OA ọkọlọtọ. Mgbe arụpụtara, niile igwe ga-anwale nditịm ruo mgbe agbaba ọma.
Anyị igwe nwere ike gafere SGS nnyocha na ndị ọzọ, otú gị n'akụkụ pụrụ ime ndokwa ka nnyocha tupu Mbupu.
N'ihi na otu onye set of akọrọ ngwa agha osisi, ma ọ bụrụ na moto achọ Siemens na ọ na-achọ 2 ọnwa mmepụta oge, ndị ọzọ nile na igwe eji 30-45 ụbọchị mmepụta oge.
Dị ka a zuru ụwa ọnụ ndú na ndị ụlọ ọrụ, anyị na-enye ndị ahịa a zuru ọrụ ngwugwu na ike na-anabata turnkey oru ngo maka ahịa. Anyị na-enye zuru ezu echichi na-ewu ụlọ ọrụ niile ngwá anyị na-Nlụpụta na-enye. Anyị ọkachamara na ukwuu ahụmahụ ubi installers na-kwara na-eju afọ anyị ahịa 'kasị aka chọrọ.
Anyị re-echichi ọrụ gụnyere pụrụ isi chọta & itinye n'ọnọdụ, iwughachi & mgbanwe, ịrụzi & re-echichi ọrụ. Ike na-agụnye usoro emebe, ngwá ọnọdụ, akụrụngwa na-akpali akpali, usoro malite & Jizọs na-ezipụ & njikwa & dị iche iche ndị ọzọ na ngwá kwa kpọmkwem chọrọ.
akọrọ ngwa agha
Ngọngọ Ndinam igwe
Room 617, Ewepụghị F, Nke 9999, Jingshi Road, Lixia District, Jinan City, Shandong Province, China
Wall putty Ịgwakọta Machine, Akọrọ ntụ ntụ Blender igwekota, Automatic kpọrọ nkụ ngwa agha Plant, kpọrọ nkụ ngwa agha Ịgwakọta Machine na-eji kuru uwe , Akọrọ ntụ ntụ igwekota Machine, Ldh koo igwekota Machine ,